Kefta tagine | Cunnooyinka jikada
ka tajines waa mid ka mid ah suxuunta ugu caansan ee loo yaqaan 'Moroccan cuisine' waxaana ka mid ah kuwa ugu caansan liin digaag tagine, hilibka lo'da ama adhiga loo yaqaan 'plum' iyo yicib ugu dambayntiina kefta tagine. Tan dambe ayaa ah tan guriga loogu kariyo labada kalena waxaa loogu sii badan yahay xafladaha sida aroosyada, halkan (ciidaha la xuso maalinta toddobaad ee dhalashada ilmaha), iwm. Maanta gudaha Cunnooyinka jikada waxaan diyaarinaynaa a kefta tagine:
Darajada adag: Easy
Waqtiga diyaarinta: 20 daqiiqo qiyaastii.
Nus kiilo ah hilibka duqadda ah (afka Marooko kefta, markaa magaca tajine)
1 basasha (Waxaan u isticmaalaa 2 maxaa yeelay way yaraayeen)
1 qaado oo ah dumin
1 qaado oo ah basbaas
2 ama 3 qaado saliida saytuunka
Farabadan oo ka mid ah dhir iyo miridh cusub la jarjarey (hadaadan haysan koriyaar waxaad isticmaali kartaa dhir)
Qaado oo ah yaanyo urursho (ikhtiyaari)
Keen tagine si aad isku kari kartid saliida saytuunka si ay u kululaato iyo inta la jarayo basasha gudaha julienne Mar haddii saliidu kulushahay, ku dar basasha. Caadi ahaan basasha waa la jarjaray, laakiin maanta waxay ahayd waqtigii la qarin lahaa, markaa markaa waa inaan dhex mariyaa miiraha.
Haddii aad doorbideyso inaad ku sameyso qaab dhaqameed:
Marka basasha ay kala badh hufan tahay ku dar yaanyada toon la jarjaray oo la jajabiyey. Markii la hagaajiyo ku dar koob biyo ah, haddii aad rabto, qaadada yaanyo urursho.
Haddii ay tahay inaad qariso basasha aniga oo kale:
Markay basasha badhkeed hufan tahay, u mari miiraha iyada oo ay weheliyaan yaanyada jarjar xabadaha, ilkaha of toonta iyo koob biyo ah. Marka wax walba la jajabiyo ku dar tajine.
Waxaan horeyba uheysanay suugada udiyaar garow halkanna laga bilaabo nidaamku waa isku mid, hadaad isticmaashay mashiinka iyo inkale. Ku dar basbaas, dumin, ka SAL iyo basbaas. Si fiican isku walaaq oo, markii maraqa bilaabmayo inuu karkariyo, ku dar dhir iyo fuud la jarjarey oo mar kale isku dar.
Inta ay muddo karkarayso, u diyaari hilibka duqadda ah adigoo sameeya kubbado cabbirka aad doorbideyso Dhaqan ahaan, tajineerka looma siiyo taarikada shaqsiga ama laguma cuno waxyaabaha wax lagu jarjaro, laakiin qof walba wuxuu si toos ah ugu cunaa tajine-ka xabbad rooti ah, marka waxaan doorbidaa in aan sameeyo kubbado yaryar si waqtiga cuntada ay ugu fududaato. Markaad sameysid dhamaan kubadaha ku dar tagine dabool 5 daqiiqo
Kubadaha hilibka rog oo mar kale dabool 5 daqiiqo oo kale si aad ugu dhamaysato karinta dhinaca kale. Iyo wax kaleba ma lihid! Horaad u haysatay taada kefta tagine diyaar.
Sidii aan horay u sheegay, tajiyada waxaa loogu adeegaa sidii loogu talagalay oo qof walba halkaas ayuu wax ka cunaa (mid walbana dhinaciisa ayuu iska leeyahay, dabcan) Si kastaba ha noqotee, saladhyada waxaa lagu siiyaa taarikada shaqsiyeed iyo kuwa wax lagu jaro.
Badanaa kefta tagine sidoo kale waxay leedahay a ukun qofkiiba. Xaaladdaas markay tahay waa in lagu daro 5tii daqiiqo ee ugu dambaysay si ay wax u dhigaan waxna ugu rusheeyaan kuumin iyo cusbo, sidaan ku arki karno munaasabaddan kale ee aan sameeyay tajineerkan:
Dadka qaarkiis waxay ku daraan ukumo la garaacay halkii ay ka buuxin lahaayeen ukumo dhan, waa arrin dhadhan ah.
Had iyo jeer waxaan dhihi doonaa: Waxa ugu fiican ee ku saabsan tajines-ka maahan oo kaliya qunyar-socodka wax lagu kariyo ee dhoobada, laakiin sidoo kale waxaa cuni kara dad badan iyagoon hadhow helin buur saxan iyo gogol lagu nadiifiyo.Waa faa'iido weyn!.
Ku raaxayso cuntadaada oo waxaad leedahay toddobaad wanaagsan!
Waqtiga diyaarinta Daqiiqado 15
Waqtiga karinta Daqiiqado 20
Wadarta waqtiga Daqiiqado 35
Kiilooriyada halkii adeeg 340
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Hilibka » Kefta tagine
Ayaa ku yidhi waa inaad sugto? Tani waa mid aad u dhadhan fiican oo waa inaad si dhakhso leh u sameysaa, hahaha.
Jawaab Veronica Cervera
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad jeceshahay. Waan u fiirsan doonaa, haddii aad diyaarsato oo aad ku daabacdo balooggaaga waxaan ku siin doonaa qoraal hahaha.
Salaan kadib waxaanad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga
Karootada iyo kareemka zucchini
Sautéed Zucchini leh Basasha, Dhiqlaha iyo taabashada geedo yaryar